Qanjirada marin la' / Dhiigga Archives - Somali Kidshealth
Leukemia waa kansarka dhiigga ku dhaca. Kansarkaani wuxuu ka biloowdaa dhuuxa lafaha dhexdooda ku jira. Dhuuxu waa nudayaasha laga sameeyo unnugyada dhiigga. Qofka caafimaadka qaba dhuuxa dhexdiisa waxaa lagu sameeyaa: White blood cells: oo ah unugyada cad-cad ee dhiigga. Unugyada cad-cadi waxay jirka ka difaacaan jeermisyada cuddurada keena. Red Blood cells: oo ah unugyada cas-cas ee dhiigga. unugyada cas-casi waxay jirta oo dhan u xanbaaraan ogsijiinta. Platelets: oo ah unugyada xinjiraynta dhiigga. Marka qofku qabo Leukemia ama kansarka dhiigga dhuuxu wuxuu si qaldan u sameeyaa unugyo cad-cad oo tiro badan oo qaab-daran. Unugyadaasi si aan kala go' lahayn ayay u samaysmaan iyadoon loo baahnayn. Unugyadaas kansarka ahi ma qabtaan shaqadii ay ahayd inay qabtaan...
Kaadi-sonkorowgu waa cuddur ka yimaada marka dhiigga ay saa'id ku noqoto xaddi badan oo sonkor ah. Nooca la yiraahdo type 1 Diabetes wuxuu inta badan ku dhacaa carruurta, halka Type 2 diabetes uu ku dhaco dadka waawayn marka ay gaaraan inta badan sannada afartanaadka. Marka ilmuhu ama wax cuno ama cabo habdhiska dheefshiidka ee jirku wuxuu shiidaa cuntadii la cunay oo ka dhigaa sonkor khafiif ah oo la yiraahdo Glucose. Nudayaasha iyo unnugyada jirku sonkorta Glucose ayay u isticmaalaan shidaal ahaan si loo sameeyo tamar iyo enerji. Glucoseka waxaa la raaciyaa dhiigga halkaas oo uu hoormoonka Insulin xanbaaro si unug kasta meesha uu jooggo loogu geeyo, oo markaas loogu isticmaalo tamar iyo korriinka carruurta. Insuliinta waxaa lagu tilmaamaa gaari xamuul oo sonkorta unnug kasta meesh...
Cuddurada, Qanjirada marin la' / Dhiigga
Inta aan loo galin sharaxaada Aneemiyada ama dhiig la'aanta waxaa fiican in la fahmo baahida aadamiga ee neef-qaadashada. Isku day waxoogaa yar in aad neefta isku celiso. Muddo yar ka diba ma adkaysan kartid, waayo waxaad u baahan tahay ogsijiin si aad u noolaato. Taasi waxa weeye in sanbabadeenu jiidaan ogsijiin jirkeenu u baahan yahay si uu u noolaado. Sidoo kale waxaan u baahanahay hab ama wado aanu nuddayaasha jirkeena ku gaarsiino ogsijiinta ay u baahan yihiin, si ay tamar u sameeyaan oo ay u shaqeeyaan. Dhiiggeenu wuxuu la mid yahay webi ama tog dhamaan jirka oo dhan dhexmaraya. Xubin kasta ama nudde kasta marka dhiiggu maro waxaa loo geeyaa ogsijiinta uu u baahan yahay iyo nafaqada uu u baahan yahay. Goormaa Aneemiya timaadaa? Aneemiya waxay timaadaa marka dhiigga ay ku ...